ကျွန်ုပ်၏ (ကျွန်ုပ်တို့၏) အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေလိုသော badass fapstronaut (နေ့ ၁၃၅ !!!) ၏ရည်းစား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကြှနျတေျာ့ (ကျွန်ုပ်တို့၏) အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဝေမျှလိုသောတစ်ဦး badass fapstronaut (နေ့က 135 !!!) ၏ရည်းစား။
ကံမကောင်းစွာပဲ Madmen ရာသီ3ကိုရှာဖွေရင်းကျွန်ုပ်ရည်းစားရဲ့ porno ဖိုင်တွဲကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ သူကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူနေတုန်း။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာဘယ်တုန်းကမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ချင်၊ မကြည့်ချင်ခဲ့ဘူး၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းစေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဆင်းရဲတဲ့ရည်းစားကကျွန်တော့်ကိုရွံမုန်းတယ်၊ ဒေါသထွက်တယ်။ သူရဲဘောကြောင်စွာတောင်းပန်ပြီးတောင်းပန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူး။ ၃ ရက် ၃ ရက်လောက်နေခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှု၊ ကိုယ့်လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူဟာငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေသလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ , 'ဖောက်ပြန်', ဤသည်အဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်မည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်း - သင်ယောက်ျားတွေသာနားလည်လိမ့်မယ်တဲ့ခံစားချက်။
ကျေးဇူးတင်စရာပဲ၊ ငါအရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်၊ ဒီအရာအားလုံးမှာငါတို့တင်ပါးဆုံရိုးမှာစွဲကပ်နေခဲ့တယ်။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာစွန့်ခွာချင်ခဲ့ပေမယ့်နာကျင်မှုမှတဆင့်အတူတကွနေဖို့နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်တကယ်အတော်လေးမယုံနိုင်စရာထင်ပါတယ် ကျွန်တော်သစ္စာဖောက်ခံရပြီးငြိုငြင်ခံရသည်ဟုခံစားရသော်လည်းကျွန်ုပ်သူ့ကိုအပြစ်တင်။ မုန်းတီးသော်လည်း၊ အခြားတစ်ယောက်သည်တကယ့်ကိုကြမ်းတမ်းခက်ထန်စွာဖြတ်သန်းသွားသောအခါတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှစ်သိမ့်မှုပေးပြီးကျွန်ုပ်သည်ရိုးရိုးသားသားထိုနေ့များထက်သူနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါတို့အချင်းချင်း ၁၀၀% ရိုးသားမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါဘယ်လိုထင်လဲ၊ သူငါမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေပေးလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ငါအများကြီးမေးခဲ့တယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာနားလည်ရန်…) သူတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး (ဆင်းရဲသောချစ်လှစွာသော!)
သူထွက်သွားပြီး ၁၀ ရက်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်စပြီးနားလည်လာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့သူကိုစာတစ်စောင်ရေးဖို့၊ သူထိုင်ချင်တဲ့အကြောင်း၊ သူပြောချင်တာတွေအကြောင်း၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတွေဘာကြောင့်သူထင်တာလဲစသည်ဖြင့်စဉ်းစားရန်စသည်တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ... အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်သော။ သူကတကယ်ဂရုစိုက်တယ်၊ ငါထင်တာကတော့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တာပဲ။ ရိုးသားမှု၊ အရှက်တကွဲဖြစ်ရခြင်း၊ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုပြwithနာတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပါ။ ငါတို့ရဲ့ခံစားချက်နှစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့ငါ့ခံစားချက်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့တကယ်ပဲကြည့်နေတယ်။
ငါကသူ့ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘုရားကဲ့သို့သောလူကဲ့သို့စဉ်းစားမိသည်၊ ဤနတ်ဘုရားများဖြစ်သော sexiness နှင့် manliness နှင့်အရာအားလုံးကိုအံ့သြဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာများကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုစဉ်းစားနေပြီး၊ ဤအရာသည်သူ့ကိုလူသားအဆင့်အထိကျစေသကဲ့သို့ငါခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ငါသူတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတာကသူရဲ့ကြင်နာမှု၊ အသိဉာဏ်၊ ဟာသနဲ့ငါ့ကို၊ ငါတို့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်မေ့လျော့နေတဲ့အရာအားလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာနောက်မှသူရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး ... သူ့ကိုငါ့ရဲ့ superherosexyman လုပ်သောအရာကိုခဲ့ကြသည်။ သူ fap လုပ်ချင်တဲ့အချိန်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသူစပြီးပြောတယ်။ ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကိုအဆင်ပြေစေတဲ့အချက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပြီးသူကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွင်းမှာလုပ်ဖို့အားပေးတယ်။ ငါ့ဆီပို့လိုက်တဲ့ရွေးစရာဓာတ်ပုံအနည်းငယ်ကိုမင်းရေတွက်မထားရင် ... ) ။
မင်းသမီးများ (သို့မဟုတ်အ ၀ တ်အစားများ)၊ သင်၏ fapstronaut နှင့်ကပ်ပါ။ ပထမတော့ခက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ မင်းကိုဘယ်တော့မှမနာကျင်အောင်မကြိုးစားဘူး၊ သူတို့ကသူတို့ဖန်တီးထားပုံကြောင့်၊ အဲဒါကိုအချိန်နဲ့အမျှအချစ်၊ အားလုံးရိုးသားမှုနှင့်နားလည်မှုအထက်။
တကယ်တော့ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ် သူခံစားခဲ့ရသည့်နာကျင်မှု၊ အရှက်ကွဲခြင်း၊ အပြစ်ရှိခြင်းနှင့်မပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုအားကောင်းစေသည်ဟုယုံကြည်သည်။
ရိုးသားခြင်း။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားကန ဦး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေသို့ရောက်ပြီးနောက်၌ပင်သင့်အနားတွင်ရှိနေရန်ယုံကြည်ပါ။ သို့သော်သင်ရှင်းပြရမည်မှာစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားပါ၊ YBOP စသည်တို့ကိုပြသပါ။ မေးခွန်းများမေးပါ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စာနာနားလည်မှုပြနိုင်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။
အတူတူဖြစ်ခြင်း! ၎င်းသည်သင်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အားပြောပြနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်တူညီသောဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၏နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာပေးပါ - ငါ noFap မှာပါဝင်ခဲ့တယ်၊ Ybop ကိုဖတ်တယ်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့သူဖြတ်သန်းသွားတဲ့သူတွေကို…
သင့်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ပါ - သင်နှင့်နားမလည်နိုင်သည့်ဤကမ္ဘာကြီးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအတွက် (သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ိုင်းဝိုင်းပိတ်ခံခဲ့ရသည်) အမြိုးသမီးမြား - ဤအရာသည်လိင်အရးလိင်အရမှတ်ချက်များစွာထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ကိုသိသည်။ သို့သော်အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းပိုမိုများပြားပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထက် ပိုမို၍ ချိုသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောစိတ်သောကမငြိမ်သက်မှု၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ယောက်ျား / မိန်းမနှင့်ဆန့်ကျင်ကွာ!
ယောက်ျား - ဤသူသည်သင်မဟုတ်သောသူမဟုတ်၊ အဘယ်အရာကိုသင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်မှာဤ ၀ မ်းနည်းမှု၊ အရှက်ကွဲခြင်း၊ ရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲ့မျက်နှာသရဲ့ရဲ့ရဲ့မျက်နှာကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ တိုက်!
TL; DR သည်ကျွန်ုပ်၏ BFs များကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း၊ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ အသင်းတစ်ခုအနေနှင့်အတူတကွပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ သူသည်ကျွန်ုပ်သိဖူးသမျှထဲမှာအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
ပြင်ဆင်ရန် - Redditor ကိုမှားယွင်းစွာပြုပြီးနောက် BOYS ကို MEN သို့ပြောင်းလိုက်သည်။ တောင်းပန်ပါ၊ ပြီးပြီ🙂